Indlela yokuLondolozwa kweCatfish Nursery - Ukulungiswa kweCatchfish • U-Yurie BSF
Xha ga mshelana - Fumana uqeqesho lwe-BSF yeMaggot Training
Mayelana Nathi - Okokuqala kwiLizwe loLimilo lweMaggots angabonakaliyo
Thenga kwaye uthengise iMaggot
FAQs Ukulima FAQ
Indlela yokuLondolozwa kweCatfish Nursery - UkuLungiswa okuCwangcisiweyo kweCatfish
Yurie | Dec 26, 2018 | Indlela yokuhlakulela i-Catfish
Umbuzo kunye nempendulo
Indlela yokuzalisa i-catfish
Nceda uncede kunye nenzululwazi yombuzo uze uphendule malunga nokuzalisa i-catfish
oku ku-SHARE (okwabiwe)
kumajelo asekuhlaleni njenge-WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter njl
Sinethemba lokuba ulwazi lokwabelana ngothando lunokulondolozwa kwethu kwixesha lokugqibela. Aaamiinn
Isiguliso sezilwanyana zeMaggot
Umxholo wakho uya apha. Hlela okanye ususe eli catshulwa kumgca okanye kwiimodyuli zoqulatho. Unokwakheka kwakhona zonke iinkalo zolu qulatho kwiimodyuli zoyilo lweModyuli kwaye wenze isicelo seCSS yangokwezihloko kule modyuli.
Ngaba ingaba ngaphandle kwe-aeration?
Ukukhupha i-catfish ngaphandle kwe-aeration ingaba, kodwa kukho umngcipheko wokukhula larva i-catfish ihamba.
Kwaye inani leentlanzi ezigcinwe emanzini alinakuba lukhulu.
Ukuba ininzi kakhulu imbewu iya kubakho i-oksijini kwaye ingabangela ukufa.
Kufuneka kuqondwe ukuba injongo ye-aeration kwisibini sokuhlambalaza kukunyusa umthamo we-oksijini kwisibondlo, ukuze sikwazi ukwandisa isixa-mali esiyi-catfish seed in the pool.
Indlela yokujongana namachibi e-larva aninzi e-moss?
Ngokunika i-footestal ngaphezu kwebhodi le-larva pool. Le nqanawa njengelitye lelanga lihamba ngqo kwiqula. Ngoko ukukhula kwe-moss kungancitshiswa.
Yenza ucoceko lwama-moss nge-scoop emnyama.
Kwakhona kufuneka okungenani kanye ngeveki unike ityuwa, i-PK okanye i-metalin blu. Ingqungquthela encinane kwindlela yokubaluleka ebalulekileyo.
Ubungakanani bendawo yokubeka impahla ngokumitha imitha nganye?
Ukugcinwa kwezinto ezinomlinganiselo kumitha nganye yesikwele kunokubalwa ngokuphindaphinda i-pool PxLxT.
Ngokomzekelo, amachibi e-catfish seed measuring 280cm x 300cm x 25cm enezinga eliphakathi kwamanzi ye-10 - 15cm kunye nokujikeleza kwamanzi, i-pool ingahlala kwizityalo ze-50.000 de ibe yayizikhulu ze-2-3.
Yiyiphi inqanaba elomeleleyo lobungakanani be600cmx200x65cm?
Ukufunda kwangaphambili kunokuphakathi kwe-500 - 1.000 umsila.
Kuze kube nini iimbewu ze-catfish zinikezwa i-powder pellets okanye i-fengli?
Imbewu yeCatfish eqala kwiminyaka emine inokunikezwa ngamapelisi emfusa kodwa kuphela kwixabiso elincinci.
Injongo yokubonelela iipilisi zondlovu kwi-catfish izirubha ukwenzela ukwandisa amandla kwi-carbohydrates ukwenzela ukuba izibungu ze-catfish ziphilile kwaye zinamandla
Kodwa kufuneka kusinikwe iimbumba ze-silk njengonikezelo lweprotheni, kuba abo bafumana ubunzima bokufumana izibungu ze-silika bangatshintshwa i-pasta yomgca.
Ukunqongophala kweMaggot kwenziwa kumaggot okanye maggots okanye izibungu mnyama okanye ijoni elimnyama liyabaleka.
Le ndlela ilula, efana nokwenza unobumba kwi-work worms.
Leyo iyona nto ibalulekileyo kwimveliso egqabini lomagog okuxutywe kunye nezinye izithako ke kwi-blender.
Ngaphambi kokuba uyisebenzise, ​​gcina kwifriji yeeyure ze-24 ukwenzela ukuba inkqubo yokuqhumisa yemvelo ibe nokwandisa umxholo wayo wesondlo unokuba luninzi.
Ukuxubusha okupheleleyo ngakumbi, unokubona iwebhusayithi www.YurieBSF.com
Zingaphi igramu zamapelisi okanye i-fengli zinikwa ukunyusa izibungu ze-catfish?
I-Pengli ipowley ipellets inikezwa ngegram enye. Indlela yokulawula ingasasazeka ngokuthe ngqo kwiimpungushe ze-catfish.
Unondla njani izibungu zentlanzi, kufuneka uhambe kwi-bibis kuqala?
Ukutya kufanele kube "ukuhlwayelwa" kuqala, ngenjongo yoko ukwenza ukuba ukutya kudlulele ngaphandle kwesisu seentlanzi, ukwenzela ukuba iintlanzi zizalise ngokukhawuleza kwaye ziphephe ukucima.
Indlela yokuzala ilandelayo:
Phala amanzi ngamancinci kwisondlo, qiniseka ukuba ungadaka.
Gxila kude kube yinto ehlanganisiweyo.
Vumela ukutya okubhitshiweyo kubhalelwe kwi-15 - 30 imizuzu de ukufumana ukutya xa uziva uhlakala okanye ithenda.
Ngaphezu koko, izibungu ze-catfish zikulungele ukugcinwa.
Ukusasaza ukutya ngokufanayo. Isixa sisetyenziswe ngokuncinane.
Nika i-catfish i-larva igcwele, Yeka ukuba izibungu ziqala ukubonakala zingenakufuna ukutya kwakhona.
Qinisekisa ukuba akukho nondlo eninzi engadliwayo yimirhubhe. Musa ukuvumela ezininzi zihlale phantsi kwe-echibini eziza kuba yi-ammonia okanye zityhefu kwimbewu ye-catfish.
Unika njani i-silk worm?
Ukufumana iziphumo eziphezulu, ukunika iilkworms kufuneka zilandele amanyathelo alandelayo:
Isinyathelo sokuqala, izibungu ze-silika zifihliwe kuqala, ukuze udoti luchithe ubuncinane omnye okanye iintsuku ezimbini.
Emva koko, ngaphambi kokuhlamba, hlambulula amanzi ade ucoceke ngokupheleleyo.
Qinisekisa ukuba akukho zidumbu ze-casut kunye ne-buildup yeeskrini ze-silk ezantsi kwe-echibini ebangela ukuba umgangatho wamanzi unciphe.
Zingaphi ixesha lokutya ngexesha lonyaka?
Xa ixesha lemvula londla liqinisekisa ukuba imvula iyeka enye okanye ezimbini iiyure, ukwenzela ukuba ukutya akuxube kunye namanzi emvula.
Ukuba ubukhulu bemvula bude, ukondla okwaneleyo kabini ngemini, oku kukunika ixesha lokutya kunye nokuxhaswa kangcono yi-catfish.
Gwema ukutyisa xa kunetha okanye kuphelile imvula, i-catfish ezondliwa xa imvula ingasengozini yokugula.
Kungenxa yokuba ukutya okudliwayo kuya kuhlanza emva kwaye wenze amanzi echibini abe mnyama.
Esinye isiphumo esibi kukuba iimeko ezifana nefungi ziyakwandisa kwaye zenze intlungu yentlanzi.
Nguwuphi umxhesho ophezulu emva kokususa isikhuphethi?
Nika i-fengli zero.
Le ndlela ifafazwe encinci.
Ukulawulwa kwesikhuphethi kusenziwa ngo-gram.
Okona owona mgca unika umgca wendlela.
Emva kokuba imbewu yeentlanzi ezinamandla inikwe i-psum ye-premium. Okanye ukugcina kwiindleko zokutya maggot protein ephakamileyo.
Ngaphandle kokuqulethe isondlo esipheleleyo kunye neprotheni ephakamileyo, indleko yokwenza i-maggot pellets iphantsi kakhulu, ngaphandle kwe-3.000 / kg kuphela.
Le yimfihlelo yenzuzo enkulu ye-catfish, eyona isondlo esinexabiso esincinci kodwa esinomsoco.
Yisiphi esinye isondlo esinikezwayo sokwenza i-catfish ngokukhawuleza?
IMaggot BSF, imingxuma, imiski njl
Ngeendlela ezilula kunye nezincinci zokwenza umlingo ngokwawo, ukuwuvula njani kwiGoogle, www.YurieBSF.com
Unokuthintela njani i-1 - 2 imbewu ye-catfish ukusasaza i-snout emhlophe?
Isizathu sesifo somsitho omhlophe kukuba i-pool igqithiselwa ukukhanya kwelanga kwaye amanzi anzima.
Iimpawu zokuqala ziindawo zamanzi ezinobumba obomvu kunye namabala amhlophe, okubizwa ngamakhowa.
Ukuze ugweme le ngxaki, ngasentla idibansi inikwe uphahla, okanye kunokunikela ngamagqabi amabhanana asebenza njengophahla.
Yiyiphi imbangela yesikhumba esilandelayo ekupheleni komphefumlo?
Isalonda esilandelayo esiphelweni sesipilisi ngenxa yemiphumo emibi yokutya okuseleyo okuba yi-ammonia.
Ukongezelela, kubangelwa ninzi enkulu ye-mucus phantsi kwezantsi.
Isisombululo ukulungiselela isixa semfuyo ukuze kungadli kakhulu kwaye ibe ngumthombo wetyhefu weentlanzi zentlanzi.
Coca i-pool rhoqo equka ukunikezelwa kwamanzi ukususa i-ammonia ekhoyo.
Kutheni kukho iimbombo kwihloko ye-catfish?
Esinye isizathu kukuba amanzi anamafu kakhulu.
Ukuze unqobe oku, landela amanzi, kwaye ungeze iiprobitics.
Iiprobiotics ukuba inokuthintela iyakwazi ukunikezelwa ngamaqabunga epapaya.
Okanye sebenzisa iprobiotics evela kwi-extract leaf.
Unokukhuphela i-tutorial kwiwebhusayithi www.YurieBSF.com
Yintoni ebangela ukuba iintlanzi zijikeleze phezu kwamanzi?
Isizathu sokuloba intlanzi sinokuthi kuba uninzi lwesondlo lunikezwa, okanye ngenxa yemozulu ebanda.
Indlela yokujongana nentlanzi ejikelezayo?
Isinyathelo sokuqala kukunika i-metallin blu, emva koko iiyure ezintathu zitshintshe amanzi njengama50%.
Isinyathelo sesibini, qinisekisa ukuba ukutya okulandelayo kuncitshisiwe, kwaye okokuqala kuphulwa ngaphambi kokukunika intlanzi.
Kulabo ababeka indawo echibini phantsi kwetayile yendlu.
Qinisekisa ukuba amanzi emvula awela ngotywala ayifuni ngokukhawuleza angene echibini, ngenxa yokuba i-moss emnyama ityile iqulethe.
Yintoni ebangela iibhokhwe ezibomvu kwisisu esisecaleni kwiphepha?
Isizathu esibalulekileyo sesifo ngumzekelo wesondlo esiphezulu.
Ukutya okugqithisileyo kuya kubangela ukuba kusele amaninzi amanqabileyo ekuhlaleni phantsi kwedibanti exutywe ne-fish mucus kwaye ibe yimbewu yezifo.
Isisombululo kukuxhomekeka kwisigxina esingaphantsi kwedesi. Wabeka isahlulo sokutya singasasazeka okanye sichithwa kakhulu.
Okulungileyo kungekhona ukufaka i-curcuma?
Kuhle kakhulu, ukongeza iziqholo ngendlela ye-ginger okanye i-ginger okanye i-garlic okanye amaqabunga e-betel aphekiweyo kunceda kakhulu ukwandisa intlanzi.
Ezi zityalo zemvelo nazo zintle njengezityalo zendalo.
Unokujamelana njani nokuma i-catfish?
Nazi ezinye iindlela zokujongana ne-catfish emi:
Ukukhupha amanzi emanzi angaphantsi.
Ukwahlula i-catfish yokulenga
Push i-3-5 ezimhlophe ze-clove uze ufefe kwi-catfish echibini
Ukucoca ityuwa yintlanzi kwi-catfish echibini.
Nciphisa ngamachiza ahlaza okwesibhakabhaka kwi-catfish echibini.
le ndlela ilapha ngasentla ibuye isilungiso sokunciphisa i-catfish mucus iphela, amanzi alula okanye aphefumle.
Zingaphi iintsuku emva kokuqhawula imbewu ye-catfish ihlelwe?
Yenza uhlobo lokuqala emva kweentsuku ze-15.
Kodwa oko kuthathwa kwanele bendolan okanye nje nge-plentongan.
Kwiintsuku ezintlanu kamva, ngaba ukuhlaziywa okupheleleyo.
Musa ukuhlenga iintlanzi ezipheleleyo phantsi kwe-15 ngosuku, oku kungasengozini yokufa kweentlanzi.
Uphakame kangakanani amanzi achanekileyo ekuhlaseleni i-catfish?
Umgangatho wamanzi awufanele udlule i-20cm.
Ngaba umbala wamanzi obomvu ulungile kwi-catfish?
Ngexesha elide ukukhula kweentlanzi ngokuqhelekileyo akuyona ingxaki.
Ukuba kwenzeka ntoni, bhetele ukwenza unyango nge probiotics rhoqo.
Uyenza njani imbewu ye-3-4 catfish ingafi ngokulula?
Ukwenza oku ngokuqinisekisa ukuba i-pool igqithiselwe ekukhanyeni kwelanga, kwaye i-¼ inxalenye yamachibi kufuneka ihlanganiswe ngamagqabi amabhanana ngokomzekelo.
Ukuba isimo sequla ngaphandle kophahla kwaye yenza idama likhanyise ilanga yonke imini, yenze utshintsho lwamanzi kangangoko 30 - 50%.
Imbewu ingakhula njani ngokubanzi?
Indlela elula kukubonelela ngembewu enomsoco, ukutya okunomsoco kunye neeprotheni ephezulu.
Kodwa ukuba uthengela ukutya kunye nale migangatho kwisitoreji, awuyi kudla indleko.
Ngoko ke enye enye into kufuneka ibe yondlo lwakho olulinganayo neemfuno zamaphuphu e-catfish kwiindleko ezincinci.
Ngaloo ndlela ngumbomvu okanye umlenze okanye izibungu ijoni elimnyama liyabaleka.
Le ndlela yilapho i-larva yeentlanzi iintsuku ezine ubudala, i-maggot iyahlulwa okanye ihlanganiswe kwaye inikwe izibungu ze-catfish.
Nika ngokunyanisekileyo ukuze zonke izibungu zentlanzi zifumane izigaba zazo.
Phakamisa i-kakaban ukuze isondlo se-maggot singabambeli kwaye sihlale.
Zingaphi ixesha kufuneka ubeke endaweni yamanzi?
Ukufakwa kwamanzi kufuneka kusekelwe kwiimeko zamanzi. Ngenxa yokuba ummandla ngamnye unamanqanaba ahlukeneyo omgangatho wamanzi.
Umgangatho wamanzi kufuneka uthathe indawo ngokukhawuleza xa amanzi echibini sele eqale ukukhupha.
Okanye xa intlanzi iqalile ukukhangela.
Ukutshintshwa kwamanzi akukho konke ngekanye, kodwa kuphela isiqingatha esiphezulu kwaye senziwa kwakhona ngosuku olulandelayo de ukuba intlanzi ibheke emva ehamba ihamba.
Unokuhlangabezana njani ne-catfish, eyokukhula kweefama?
Zininzi izimbangela zokukhula kwe-catfishfish, ngokuqhelekileyo kuba umzekelo wesondlo awuntle kwaye umgangatho wesondlo onikezelweyo ngowona mgangatho ophantsi.
Ingxaki yobukhulu beendleko zokutya kwenzeka kwimimandla emininzi.
Ngenxa yoko abalimi be-catfish kufuneka babe nobuchule bokuzilungiselela ukutya.
Esinye isisombululo kukudala ukutya okunye okuvela kumlenze.
Iinkcukacha malunga nendlela yokwenza okunye ukutya okuvela kumagog kungabonwa kwiwebsite ye-BSF yurie.
Kuhlobo lwe-google yurie bsf okanye udidi www.yuriebsf.com
Indlela yokwenza uhlaza lwamanzi olwandle?
Ngokukhethekileyo akuwona umbala wamanzi aluhlaza okhethwayo, kodwa kukho ezininzi izilwanyana eziphilayo ezincinci kumanzi olwandle.
Kungenxa yokuba ubukho bezilwanyana ezincinci ezihlala zibonisa ukuba amanzi alungele ukusasaza imbewu.
Izilwanyana ezincinci ngendlela yeziphunga zengxube, i-zoo plankton kunye nabanye ngaphandle kwamanzi afanelekileyo ukuba asasaze iintlanzi kunye nokutya okongeziweyo kwintlanzi ngokwayo.
Nantsi enye indlela yokwenza ngokukhawuleza ngokukhawuleza kwamanzi epulazi:
Ukufakelwa kwamanzi ahlambulukileyo, Amanzi acocekileyo avela kumanzi amanzi okanye emanzini asemhlabeni.
Ukuba akukho manzi asemgangathweni kwaye ufuna ukusetyenziswa kwamanzi atholakala kum pam amanzi, kufuneka kusetyenziswe ubuncinane iintsuku ezintathu ukwenzela ukuba isinyithi kunye neengqungquthela ezimbi zihlala phantsi kwesitya.
Isinyathelo esilandelayo siqhumisa ngokufaka ifake enye yesichumisi kwaye siyishiye enye iveki okanye ezimbini.
Ukulawulwa kweprobiotic kulungile kwaye kukunceda ukukhawuleza amanzi echibini ukuya eluhlaza.
Emva kweveki okanye ezimbini iiveki amanzi aya kuphendulela obuluhlaza kwaye kuya kuba nemiphunga emininzi kunye nezinye izilwanyana ezincinci.
Indlela yokujongana namachibi e-foamy?
Esinye sezimbangela zamanzi amanzi kukuthi intlanzi inxinxantathu ephezulu kakhulu.
Ukuba oko kwenzeka, yenza utyontsho ngokuhlula okanye ukwahlula iintlanzi kwiimithombo zamanzi ezahlukeneyo.
Kutheni amaqanda amaninzi athatyathwa, kodwa abaninzi bafa?
Inani labantu abafa lingaba kuba umgangatho womama awulungele.
Ngoko ke, qiniseka ukuba i-catfish brood stud kufuneka ikulungele.
Qinisekisa ukuba ukunakekelwa kwe-catfish broodstock kufuneka kunikezwe ngokutya okuphezulu kwiprotheni kunye nokugqiba ukutya kunye nokuqwalaselwa okhethekileyo ngaphambi kokuzaliswa
Unokwenza njani izibungu ze-catfish?
Nika ukutya okunomsoco ophezulu njengomgogodla we-BSF.
Yondla imbewu kuqala ngaphambi kokuba unike kwaye unike i-ginger okanye amaqabunga epapaya ngokusika izicucu ezincinci njengezenzibizo zendalo zemirhubhe.
Hlola indawo ye-99 kwezinye iifama zeMaggot!
Xhumana noYurie BSF
Akukho zikhundla ezinxulumene nazo!
Imiba ehamba phambili 2019
10 Yurie Inkqubo yoPhumelelo
Isikhokelo sokuLungisa iMaggot
I-99 Indawo ye-BSF iMaggot ifama
Thenga kwaye uthengise i-Maggot BSF kunye nendlela yokuthengisa iMaggot
Iingxowa zoNcedo zabahlobo
yenkxaso yemali yokulima
Joyina uMmandla weMaggot ngaphandle kokuNuka
I-imeyile Idilesi *
Ukulima kwe-BSF Media Maggot Bran
Indlela yokutsha kwe-2019 BSF Imfuyo yezilwanyana
Indlela Yotshisa iRishu yeRis / iRishu ye-Rice ye-Catfish Feed
Ukusetyenziswa kweCandelo le-Oil Oil for Feed Feed
Indlela yokuzalisa i-Sangkuriang 2019 Catfish
ukulima umlingo ukulima umlingo ukuze kungabi kunuka maggots Afrika ukulima umlingo omnyama uhamba Indlela yokulima ye-BSF ukulima umlingo ngaphandle kovumba ukulima kwemithombo yamanzi yamaggot ukulima umlingo onobumba ukulima kwemaggot nge em4
UYurie BSF - UkuQala kweMaggot yokuqala yehlabathi
Fumana Ukuqeqeshwa kweMaggot yamahhala
Imephu yeSayithi - I-Sitemap Yurie BSF
Khuselo lo khu seleko
© 2000-2018 FreshBooks | Ukufowunela i-Free Free: 0812 - 2105 - 2808